Thursday June 21, 2018 - 10:17:05 in Wararka by Super Admin
Indhaha waxa loogu yeero beesha Caalamka ayaa waayahan si aad ah ugu soo jeeda Geeska Afrika sababo la xiriira iney ka sameeyaan dhaqaale, midey xoog ku qaataan iyo midey ganacsi ka sameeyaan intaba.
July 16, 2018.Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa la shaaciyay in uu booqasho ku tagayo geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya.
Inkastoo wararka qaar sheegayaan in sidoo kale uu Itoobiya booqan doono ayaa waxaa xusid mudan in ay socdaalkiisa ku wehlin doonaan wafdi ka kooban 350 qof oo la sheegay iney dunida caan ka yihiin.
Booqashada ugu muhiimsan ee ujeedka safarkiisa waxa uu ku tegayaa deegaanka uu ka soo-jeedo ee K’Ogelo, Siaya county, halkaasoo uu ku daah-furi-doono NGO ay leedahay walaashiis oo lagu magacaabo Dr Auma Obama.
Obama ayaa waxa uu Kenya kula kulmi-doonaa Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalkaas iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, oo uu isaguna siin doono billad maadaama uu ka tanasulay in badan cabashadii doorashada.
Safarkiisa ayaa ah safar sidoo kale xambaarsan fisqi la doonayo in dhaqaale laga sameeyo iyadoo ay la socdaan dad uu kamid yahay Oprah Winfrey, heeshaaga Akon iyo ninka la sheego inuu Afrika ugu taajirsan yahay ee Aliko Dangote.
Obaama, ayaa sidoo kale ra’iisulwasaaraha Itoobiya, ugu hambalyeyn doona guushii uu kasoo hoyay socdaalkii uu Muqdisho, ku tegay halkaasoo loogu soo saxiixay mar qura afar Dekedood oo Soomaaliya ku yaalla.